दिनमान गुर्मछान, ( )
सुधालाई देखेँ, अचानक । ऊ मेरै अगाडि मतिरै लम्किदै थिई । अब त उसले पनि मलाई देखी । हाम्रा आँखा चार भए ।
म अडिएँ । धेरै पछि भेट्दैछु उसलाई, चार वर्ष भइसक्यो क्यारे ।
‘सुबोध तिमी ? आज अचानक भेटियौ । उस्तै छौ, फेरिएन छौ ?’ नजिक पर्नासाथ एकैचोटि धेरै कुरा मनमा गुम्साए झै भनी र प्रश्न पनि गर्न भ्याई ।
म फिस्स हासेँ । तर ऊ फेरिएकी थिई । पातली, धेरै होइन, कम्मर छिनेकी । मेकअप टन्न गरेकी देखिन्थी ।
‘अँ । तिम्रो खबर के छ नि ?’ सोधिहालेँ ।
‘यस्तै त हो नि !’ उसले मलाई एकोहोरो हेर्दै रहिछ । मैले उसको टाइट पहिरनमा कसिएको शरीर हेर्न भ्याएँ । सबैभन्दा पहिले मैले उसको सिउँदो हेर्न भ्याएछु । खाली थियो ।
ठमेलको बाटोमा हामी उभिएका थियौँ । बाटो हिड्नेले हामीलाई नै हेर्दै रहेछन् । मलाई अप्ठ्यारो लाग्यो, भनेँ ‘उभिएरै कुरा गर्ने कि ? कतै बसौ ?’
उसले भनी,‘जाम् कफी पिउदै कुरा गरौंला । म थाकेको पनि छु ।’ उसले अलि परको कफीसपमा लगी । म उसको शरीरबाट आइरहेको हरहर परफ्युमको बास्ना पछ्याउँदै पछि लागेँ ।
हामी टेबलमा आमुन्नेसामुन्ने भएर बस्यौं ।
बेयरा हामी छेउ आयो । उसका हातमा टिप्नका लागि सानो नोटबुक थियो । ‘दुई कफी’ भन्दा उसले त्यसमै टिप्यो । अलिकति झुके जस्तो गर्यो । नयाँ युगको नयाँ शैलीका ‘कमैया’ जस्तो लाग्यो । यसरी सम्मानार्थ नझुके हुन्थ्यो, यस्तै सोचेँ ।
‘अनि के गर्दैछौ ? कस्तो चल्दैछ जिन्दगी ?’ सुधाले ध्यान खिच्न खोजी । धेरै पछिको भेटले होला उसले धेरै कुरा जान्न चाहेकी थिई ।
‘स्थायी काम त केही गरेको छैन । पत्रपत्रिकामा सानोतिनो लेखेरै धानिराछु ।’ बेरोजगारीको पीडा सबै के भन्नु ! आखिर जिन्दगी आफैँले चलाउने हो ।
‘लेखेर पनि बाँच्न सकिन्छ ?’ उसले आश्चर्यताको विस्फारित आँखाले हेरी । मानौं मैले नवौँ आश्चर्यका कुरा गरे जस्तो । ‘हैन, कुनै न कुनै काम त गरेकै होला ।’ कुरा थपी ।
अब के भन्ने ? वास्तविकता यही थियो । फेरि दोहोर्याएँ । स्पष्टै पार्न खोजेँ । उसले पत्याएन । यस्तै लाग्यो, उसको मुखाकृतिले मलाई देखाइरहेको थियो ।
कफी आइपुग्यो ।
कफी पिउन थालेँ । उसले ब्यागबाट चुरोट झिकी । मतिर तेर्स्याई। मैले खाने गरेको छैन भन्ने स्पष्टीकरण दिएँ । उसले फेरि पनि मलाई घुरी । चुरोट सल्काउँदै कफीको चुस्की लिन थाली ।
‘तिमी के गर्दैछौ नि ?’ पालो मेरो थियो, सोधेँ ।
‘तिम्रै जस्तो हो । बाँचिराछु ।’ उसले झन् छोटो उत्तर दिई louis vuitton outlet uk । म अलमल्ल परेँ । मैले ढाँटेको ठानेकी थिई कि क्या हो ! उसले नि कुरा छली । 'तिम्रो जस्तो भन्नाले कस्तो ? मैले जस्तै सानोतिनो लेखेर कि बेरोजगार बनेर ?'
तर मैले फेरि सोधिनँ ।
‘सिम्पल सिम्पल कान्छीको डिम्पल पर्ने गाला’ उसको मोबाइल बज्यो । ऊ मोबाइलमा बोल्न थाली, ‘म आइसकेँ । हुन्छ, कुराई राख्नू । एकै छिन हो ।’ उसले मोबाइल कानबाट हटाउँदै कफीतिर हात लम्काई । अर्को हातमा चुरोट थियो, सकिनै लागेको ।
‘कसले फोन गरेको ? तिमीलाई हतार छ जस्तो छ नि !’ सोध्न नहुनेथ्यो कि ! सोधिहालेँ । म ऊसँग अझै बस्न चाहन्थेँ । उसँगको सामिप्यतामा आजको क्षण केही अरू बिताउन चाहन्थेँ । चुरोटको धुवाँ उडाई । धुवाँ हामीबीच बाक्लै गरी उडिरह्यो । replica louis vuitton handbags
‘काम गर्ने ठाउँबाट हो । हतार चाहिँ छैन । सुबोध, तिमीसित बल्लबल्ल भेट भाको छ । कुरा गर्न बाँकी छ ।’ फेरि चुरोट ओठमै टाँसी । मलाई उसले चुरोट तानेको मन परेको थिएन । भन्न चाहिँ सकिनँ ।
‘काम गर्ने ठाउँ नजिकै छ ?’ सोधिहालेँ ।
‘अँ, नजिकै छ ।’ रेशमी कपाल मिलाई । उसको खाली सिउँदोमै आँखा पुग्यो ।
‘एक्लै छौ कि ! बिहे गर्यौ ?’ अप्ठेरो मान्दै सोधी । उसको बोली अड्किएको थियो । टेलिकमको मोबाइलसेवा जस्तै आवाज किस्तामै गुञ्जियो । अलि अप्ठेरो, सकस किसिमले ।
म अलमल्ल परेँ । उसको अप्रत्यासित प्रश्नले पुरूषत्व र बेरोजगारी दुवैलाई चुनौती दियो । यो उमेरसम्म एक्लै थिएँ, र बेरोजगारीले बिहे गर्ने आँट कहिल्यै आएन । भनिदिएँ, ‘छैन । म एक्लै हो ।’
उसको अनुहारमा हर्ष र पीडा दुबै पोतियो । replica louis vuitton handbags मतिर पुलुक्क हेरी । नजर अलिकति झुकाई । फेरि चुरोटको सर्को तानी । त्यही चाहिँ मलाई मन परिरहेको थिएन । ऊ त्यही बेलाबेला दोहोर्याई रहन्थी ।
सुधा काभ्रेको डाँडापारिकी थिई । राम्री, चिटिक्क परेकी । पढाई ठिकै । हामी एउटै कलेजमा भर्ना भएका थियौं । मीनभवनमा भेट भएको थियो हाम्रो । राम्री भएकीले केटाहरू उसको पछि लाग्थे । सबैको मुखमा उसको नाम हुन्थ्यो ।
तर उसले कसैलाई भाउ दिएकी थिइन ।
कलेजबाट फर्किदा उसको र मेरो बाटो दस मिनेटका लागि भए पनि एउटै पर्थ्यो । फर्किदा प्रायः हामी सँगै पर्थ्यौं । म ऊ भन्दा पनि लाजालु स्वभावको थिएँ, र त सधै उसको प्रश्नको जवाफ मात्र दिन्थेँ । आफू बोल्न कहिल्यै अघि सरिनँ ।
‘किन अहिले सम्म बिहे नगरेको नि ?’ अहिले भने हाँस्दै सोधेकी थिई । व्यंग्यपूर्ण मुस्कान ओठभरि पोतिएको थियो ।
‘यस्सै’ मेरो जवाफ थियो । अरू के भन्नु र !
‘तिमीले चाहिँ किन नगरेको नि ?’ ज्या फुत्किहाल्यो । leather ipad mini case अझै पनि मेरा आँखा उसका खाली सिउँदोमै पुग्थे । सोधेपछि बेकार सोधेछु, लाग्यो । मुटुको कम्पन बढेको थियो ।
‘तिमीलाई पर्खिराखेकी नि !’ ऊ मरीमरी हाँस्न पुगी । उसले मलाई जिस्क्याएकी थिई । उसका हातले मेरा गालामा प्याट्ट हिर्काई, बिस्तारै मायालु पाराले । म सरमले लाल भएँ । कफी उठाएर पिउन थालेँ । उसलाई घरिघरि चोर नजरले हेरेँ । ऊ पनि अप्ठेरो मानेकी थिई । अब हामी चुपचाप थियौं । वातावरण सुनसान थियो ।
तीन वर्षसम्म मैले उसको आनीबानी नै थाहा पाउन सकिनँ । प्रायः भेट हुन्थ्यौ । पढाईकै गफ चल्थ्यो । कहिले काही भने घरको कुरा गर्थ्यौं । बाटोमा हुन्थ्यो हाम्रो गफ ।
ऊ घरको एकमात्र छोरी । दाजु उतै गाउँमा किसानी गर्थे । आमा सानैमा बितेका । बाबु चाहिँ गाउँमा प्रा.वि.मा शिक्षक । ऊ काठमाडौंमा फुपूसँग बसेकी थिई । मैले louis vuitton handbags 2013 जानेको उसको बारेमा यत्ति हो ।
गोरी, जिउडाल मिलेको । उसको मीठो बोलीको जादुले मलाई तानिसकेको रहेछ । कुनै दिन ऊसित भेट नहुँदा खल्लो लाग्थ्यो । छटपटि बढेर आउथ्यो । उसलाई मन पराइसकेको रहेछु । मलाई यस्तै लाग्थ्यो । उसले चाहिँ के सोच्थी, मैले कहिल्यै महसुस गर्न सकिनँ । तीन वर्षसम्म हाम्रो गहिरो मित्रता गासिएको थियो ।
तेस्रो वर्षमा मभित्र उसप्रति प्रेम फक्रिसकेको थियो । व्यक्त गर्न सकेको थिइनँ । म मौकाको खोजीमा थिएँ । फागुन महिना । त्यसै पनि प्रेमको उत्साह मनभरि भरिने समय । प्रेम दिवस आयो । म यो अवसरलाई गुमाउन चाहन्नथेँ ।
बिहानै तयार भएँ । नयाँ लुगामा ठाटिँदा लाज पनि लाग्यो । तर आज जसरी नि भन्छु भन्ने दृढताका साथ अघि बढेँ । तीन दिन भइसकेको थियो, सुधासँग भेट नभएको । कोठा देखेको थिएँ र म त्यतैतिर लागेँ ।
कोठामा ऊ तयार भएकी थिई । यो देखेर म छक्क थिएँ । मलाई एका बिहानै देखेर सुधा झनै छक्क परी । के म आउँदैछु भन्ने उसले थाहा पाएकी थिई ? म मनमनै सोच्दै थिएँ ।
‘ओहो ! कस्तो अचम्म, एका बिहानै आयौ नि !’ उसले भनी ।
‘अ, तिमीलाई भेटौँ भनेर ।’ leather ipad cases
ऊ एक्लै रहिछ । फुपू बिहानै काममा निस्किनु भएको रहेछ । म भनौ कि नभनौ दोधारमा थिएँ । उसले चिया बनाउञ्जेल म आफैंलाई धिक्कार्दै थिएँ । कारण म भित्रको लाछीपनले प्रेम प्रस्ताव राख्न डर मानिरह्यो ।
‘आजको तिम्रो प्लान के छ ?’ उसैले सोधी ।
‘केही छैन ।’ थुक्क ! डरपोक बोली हाल्यो । ipad portfolio case भन्नुपर्ने कुरा भन्नै सकिनँ ।
‘अनि तिम्रो नि ?’ डराई डराई सोधेछु ।
‘रमेशलाई भेट्न जादैछु । आजको पुरा समय उसैलाई दिदैछु । मेरो त फुल्ली डेटिङ् छ । तिमीलाई थाहा छैन, आज प्रणय दिवस हो ?’
मेरो कान रनक्क रन्किएर आयो । उसका सबै कुरा मगजमा बस्नै सकेन । टेकेको धरातल भासिए झैं लाग्यो । भाउन्न छुटेर आयो । कतिखेर उसले चिया दिई, कतिबेला त्यहाँबाट बाहिरिएँ थाहै पाइनँ । ऊसित बिदा पनि मागे कि मागिनँ, होसै भएन ।
बाहिर आएपछि यति थाहा पाएँ, उसलाई दिन भनी ल्याएको फूल उसको कोठामै खसालेछु ।
‘अचेल कोठा कता छ नि ?’ उसले सोधेपछि म वर्तमानमा फर्किएँ ।
‘पाटन’ गह्रुङ्गो आवाज निस्कियो । लाग्यो अझै पनि म ऊसित खुलेर बोल्न सकिरहेको छैन ।
‘रमेश कहाँ छ नि ?’ यो सोध्न नहुने थियो कि ! चिप्लिहाल्यो । उसको अनुहारमा रगत सोहोरिएर आएको प्रस्टै देखेँ । उनीहरू बीच के भयो मलाई थाहा थिएन ।
‘त्यो मुर्दारको नाम नलिऊ । त्यो हरामी अहिले विदेश गा’छ । साला धोकेबाज ।’ अचानक ऊ गाली बक्न थाली । मलाई अब पो बेकार सोधेछु जस्तो लाग्यो । आत्मग्लानी भयो । सायद मेरो अनुहारले पनि बतायो क्यार ऊ एकैछिनमा शान्त भई ।
उनीहरूबीच लामो प्रेम भएन छ । रमेशले सुधालाई धोका दिएको रहेछ । मान्छे चिन्न नसकेकोमा उसले पछुतो मानी । म उसका कुरा सुनिरहेँ ।
यसबीच घरको कुरा गर्यौं । उसको बाबु तीन वर्ष अघि बितेछन् । भाउजू छुच्ची भएकीले ऊ घर फर्किन । काठमाडौंमै दुःख गर्न थाली ।
‘सिम्पल सिम्पल...’ उसको मोबाइल बज्यो । मलाई थाहा थियो, यो उसको काम गर्ने ठाउँबाट आएको हो । उसले मोबाइलको स्क्रीनमा हेरी । साइलेन्ट मोडमा राखी, फोन उठाइन ।
हामीले तीन/तीन कप कफी खाइसकेका थियौं । उसलाई ढिला भएको मैले बुझेको थिएँ, भनेँ‘ सुधा अब उठौँ क्यारे ! तिमीलाई नि ढिला भइसक्यो ।’
मलाई हेरी र घडीतिर आँखा लगाई । दुई घण्टा बितिसकेको थियो । ऊ पनि सहमत भई । उठ्नेबेला मेरो मोबाइल नम्बर मागी । भनिदिएँ, उसले मोबाइलमा सेभ गरी र भनी, ‘मिस कल दिन्छु । सेभ गर है !’
सहमतीमा टाउको हल्लाएँ ।
काउन्टरमा म तिर्ने भन्नेमै हानाथाप भयो । मैले नै जितेँ । गर्व लाग्यो । बिलमा विशेष छुट लेखिएको थियो यसरी, ‘भ्यालेन्टाइन डे विशेष छुट ।’ म झन छक्क परेँ । आज प्रेम दिवस रहेछ । धेरै भएथ्यो यस विषयमा नसोचेको । बिर्सिसकेको रहेछु ।
बाहिरिदासम्म उसले मेरो मोबाइलमा फोन ट्राइ गरिरही । तर लागेको हैन । हिड्दा पनि बाटोमा डाइल गरिरही । बरू टिपाएकी भए हुन्थ्यो, मलाई यस्तै लाग्यो । छुटिने बेला भएछ, उसको काम गर्ने ठाउँ आइसकेको थियो ।
‘यही हो मेरो काम गर्ने ठाउँ ।’ उसले अग्लो घरमा देखाई, जहाँ ठूल्ठूला बोर्डहरू टाँगिएका थिए । उसको इसारा चाहिँ एउटा झ्यालको बोर्डमा थियो । लेखिएको थियो,‘ युनिक मसाज सेन्टर’
‘म गएँ है ।’ उसले हात हल्लाइसकेकी थिई । अनायासै मैले नि बिदाईको हात हल्लाएछु । ऊ त्यहाँबाट हराइसकेकी थिई । म भारी मन लिएर अघि बढ्न थालेँ । मनमा अनेक विचारहरूले युद्ध गर्दै थिए । लैनचौर पुग्दा मोबाइल बज्यो । मेसेज आएको रहेछ, हेरेँ । सुधाको थियो । म स्तब्ध भएँ । लेखिएको यस्तो थियो, ‘तेस्रो वर्ष, आजैको दिन मेरो कोठामा तिमीले छोडेको फूल अझै मसँग सुरक्षित छ ।’
मेरा आँखा भने मोबाइलमै एकत्रित भइरह्यो । र छाडेको फूलले बेस्सरी घोच्न थाल्यो ।